किन मृत्यु भइरहेछ यतिका धेरै बालबालिकाको ?
रवि प्रकाश, बिबिसी
भारतको झारखण्ड जमशेदपुरको महात्मा गान्धी मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल (एमजीएम) मा यसवर्ष १ सय ८५ बालबालिकाको मृत्युभएको छ । यो तथ्यांक सन् २०१८ को मे ३१ सम्मको हो । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश नवजात शिशु थिए।
अप्रिल महिनामा मात्र ४७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । एमजीएम अस्पतालले बालबालिका मृत्युुको पुष्टि गरेको छ । अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. एनपी चौधरीले जनवरीदेखि मे महिनासम्म अस्पतालमा २ हजार ४ सय ७८ बालबालिकाका उपचारका लागि ल्याइएकामा १ सय ८५ को मृत्यु भएको जनाए । उपचारका लागि ल्याइने बालबालिका सबैलाई बचाउन सम्भव नहुने उनको भनाई छ।
आवश्यक भौतिक साधनको समस्याको सामना गरिरहेको भएपनि अस्पताल व्यवस्थापले सकेसम्म कम बालबालिकाको मृत्युहोस् भन्ने चाहेको डा. चौधरीले बताए।
तर मृत बालबालिकाका आफन्त भने भौतिक साधनको कमी रहेको भन्ने अस्पतालको भनाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरुका अनुसार अस्पतालका डाक्टरहरु नै उपचारमा गम्भीर देखिँदैंनन् । पुुष्पा नामकी महिलाले भनिन्, ‘छोरीलाई ज्वरो आए पछि एमजीएम अस्पताल लिएर गइयो, डाक्टरहरुले इन्जेक्सन दिए र स्लाइन चढाए, निकोजस्तै भएकी छोरीलाई खानेकुुुरा खुवाउन मन लाग्यो र खुवाए, तर केहीबेरमै उसको श्वास बन्द भयो र निधन भयो।’
धेरैजसो बालबालिकाको मृत्यु डाक्टरको लापरवाहीका कारण हुने गरेको पीडित परिवारको भनाई छ।
उक्त अस्पतालमा गतवर्ष २०१७ मा १ सय ६० बालबालिकाको मृत्युभएको थियो । अस्पतालमा बच्चाको मृत्यु बढ्न थालेपछि झारखण्ड उच्च न्यायलयले गम्भीरतापूर्वक लिँदैं जिल्ला न्यायाधीशलाई अस्पताल निरीक्षणका लागि पठाएको थियो र न्यायाधीशले अस्पताल व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यस्ता कमजोरीहरु आजसम्म जस्ताको तस्तै छन्।
सयौं बच्चा भर्ना हुने गरेपनि अस्पतालमा जम्मा ६ इन्क्युुबेटर छन् । एउटा इन्क्युुबेटरमा एक बच्चा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्पतालमा एउटा इन्क्युुबेटरमा ५ बच्चा राखिन्छ।
अस्पताल प्रमुख डा एसएन झा नवजात शिशुको मृत्युको प्रमुुख कारण उनीहरु कुपोषित हुनु नै रहेको बताउँछन् । गर्भवती महिलाहरुमा रक्तअल्पता हुने गरेका कारण अधिकांश शिशुु एक किलोग्रामभन्दा पनि कम हुने गरेको उनी बताउँछन् । यस्ता बच्चालाई श्वास लिन समस्या हुने भएकाले नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा राखिन्छ । तर त्यहाँ पनि उनीहरुलाई बचाउन समस्या हुन्छ।
यस्ता बच्चालाई जन्मिएको तीन–चार दिनमै बर्थ एस्फिक्सिया हुन्छ । यस अवस्थामा बच्चा न रुन्छ, न श्वास लिन सक्छ र उनीहरु मृत्युको मुखमा पुुग्छन् ।